"Dia nitsangana ny mpisoronabe ka nanao tamin’i Jesosy hoe: Tsy mety mamaly akory va Ianao? Inona no iampangan’ireto Anao? Nefa tsy niteny Jesosy." Matio 26:62, 63
Tamin’ireo fotoana samihafa nitsarana an’i Jesosy, dia nangina Izy. Fanginana hafahafa, satria mandà tsy hiaro tena Izy, mandà tsy hamaly ireo vavolombelona mandainga miampanga Azy. Na ny mpisoronabe aza dia sosotra tamin’izany: “Ampianianiko amin’Andriamanitra velona Ianao hilaza aminay, raha Ianao no Kristy, Zanak’Andriamanitra”. Hoy Jesosy taminy : “Voalazanao” (Matio 26:63, 64). Ampy Azy ny nilaza ny marina. Hohelohina ho faty Izy noho izany, satria niteny hoe Izy no Zanak’Andriamanitra.
Rehefa nentina teo amin’i Pilato i Jesosy dia nangina, ary nahagaga ilay manam-pahefana romana izany. Ny hany nandraisany fitenenana, dia ny hampahafantatra ny maha Andriamanitra Azy sy ny hilaza fa ny niaviany amin’izao tontolo izao dia ny “hanambara ny marina”. Marina izay tsy nekena hoe marina, nefa hazavana tsy manam-paharoa namirapiratra teo amin’ny tenany, teo anivon’izao tsy rariny sy firongatry ny faharatsiana izao.
Tao amin’i Jesosy, ny fanginana dia fanambarana ny fahamarinana. Nampianatra ampahibemaso tao amin’ny tempoly Izy, kanefa zara raha nohenoina. Fa tamin’ireo fotoana nialoha ny fijaliany kosa, dia nangina Jesosy.
Ahoana no hahatakarana izany fiovana manaitra izany? Ny fanginany ve tsy fanehoana lavorary ny fankatoavany an’Andriamanitra? Tsy nitady ny hitsoaka Jesosy, fa nandeha tamin’ny lalana hitondra Azy eo amin’ny fampangirifiriana teo amin’ny hazofijaliana. Tsy azon’ny olona ny nataony, nolavina Izy, nambaniana, nanirery tanteraka Izy nanatona ny fahafatesany, teo ambany mason’Andriamanitra. An-tsitrapo no nirosoan’i Jesosy tamin’io tanjona io. Izany rehetra izany no lazain’ny fanginany.
Ho an’i Jesosy, ny fanginana dia fanambarana ihany koa ny fitiavana. Fitiavana mahery noho ny fahafatesana, fitiavana lalina, fitiavana an’Andriamanitra sy fitiavana antsika.
Nangonin'i R. Roger